Tekinoroji & Kugadzira - AngelBiss Healthcare Inc.
Zvitupa zvepamutemo zvakawanikwa naAngelBiss mumakore achangopfuura:
Mhando yemhando yezita: Kuvhunduka kwekutora uye yekudzora ruzha chishandiso cheokisijeni concentrator
Patent nhamba: ZL201921409276.x Mvumo yekuzivisa zuva: June 23, 2020
Mhando yemhando yezita: bhureki rekunyorova bhodhoro
Patent nhamba: ZL201921409624.3 Mvumo yekuzivisa zuva: June 23, 2020
Mhando yemhando yezita: silencer yeokisijeni concentrator
Patent nhamba: ZL201821853928.4 Mvumo yekuzivisa zuva: Chikunguru 26, 2019
Design zita: magetsi kubvisa mudziyo
Patent nhamba: ZL201730552460.x Mvumo yekuzivisa zuva: June 29, 2018
Patent nhamba: ZL201730552466.7 Mvumo yekuzivisa zuva: June 29, 2018
Mhando yemhando yezita: yakasanganiswa adsorption sisitimu yemolekyuli sieve oxygen concentrator
Patent nhamba: ZL201320711652.7 Mvumo yekuzivisa zuva: June 18, 2014
Mhando yemhando yezita: chivako chepasi chepasi che adsorption system
Patent nhamba: ZL201320515904.9 Mvumo yekuzivisa zuva: Kukadzi 26, 2014
Mhando yemhando yezita: Iyo yakasanganiswa yekupedzisira chivharo chimiro che adsorption tower
Patent nhamba: ZL201320548682.0 Mvumo yekuzivisa zuva: Kukadzi 12, 2014
Izvo zvinobudirira patent kunyorera zvinotikurudzirawo kuti tipe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye kuunza hutano uye mufaro kune vamwe vatengi.
AngelBiss ine akasiyana gungano mutsara weakasiyana emhando zvigadzirwa zvine yakajairwa mashandiro system. Asati agadzira, zvese zvinhu zvinonyatso kuongororwa uye kusarudzwa neIQC. Uye panguva yegungano, yega yega gungano maitiro anoomeswa kuongororwa, uye chigadzirwa chigadzirwa chinonyatso kuedzwa neiyo yepamusoro yekuongorora dhipatimendi. Ivo vanoshanda vanoshanda zvine mutsindo zvinoenderana neyakajairika mashandiro ehurongwa. Zvese Iyo yekugadzira maitiro inoenderana neIO epasi rose zvinyorwa.